Akhriso: Maxaa Looga Hadlayaa Kulanka Golaha Shacabka? – Goobjoog News
Xildhibaannada golaha shacabka ee Barlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxaa ay kulan ku yeelanayaan xaruntoooda Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho.
Golaha ayaa kulankooda maanta waxaa looga hadli doonaa ajandayaasha kala ah:
1-U codeynta xubnaha guddiga adeega garsoorka
2- ucodeynta xubnaha guddiga la dagaalanka musuq-maasuqa.
golaha ayaa sidoo kale waxaa ay akhrinta sedexaad marsiin doonaan hindise sharciyeedka notaayooyinka Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha golaha shacabka ee Baarlaamanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa dhawaan golaha barlamaanka kula dar daarmay in xoogga la saaro dar dargalinta howlaha uharsan golaha
kulanka ayaa waxaa uu qeyb ka yahay kal-fadhiga 7-aad ee golaha oo ah midkii ugu dambeeyey maadama xildhibannada dib loo soo dooranayo waxaana horyaallo shuruuc uu kamid yahay dib-u eegista Dastuurka.
Hoggaamiyaha Tigray-ga oo Xaqiijiyey Inay Weerareen Asmara
Dowladda Qaatar iyo Qaramada Midoobay oo Kawada Hadalay Soomaaliya
Wasiirkii Arrimaha Dibadda Syria oo Geeriyooday